Kilo terhus — Steemkr
Nahoana isika no mianatra ny teny anglisy miaraka amintsika? Ny Courses amin'ny teny Anglisy momba ny fianarana fianarana amin'ny tranokalantsikaFranchisingCareers
Adverbs dia ampahany manan-danja amin'ny fiteny iray satria maneho ny fomba atao (matoanteny) atao izy ireo. Rehefa te-hamaritra ny fomba isehoan'ny hetsika matetika isika dia mila mampiasa adverbs of frequence.Manao ahoana ny fampianaranao amin'ireo mpianatrao ? Vakio mba hahafantarana ny toro-hevitra sy ny ohatra avo indrindra!
Inona avy ny Adverbs Frequency?
Ny dikan-teny matetika dia mamaritra ny faharetan'ny hetsika iray. Misy adiresy enina avo roa heny amin'ny fampiasana amin'ny teny anglisy: matetika, matetika (na amin'ny ankapobeny), matetika, indraindray, ary tsy misy mihitsy.
Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mampiditra na mamoaka ireny avy amin'ny mpianatrao ireo? Iza amin'ireo no hitanao fa mazàna ny mpianatrao matetika? Ny fomba tsara hanazavana ny fahasamihafana amin'ny fahita matetika dia amin'ny fampiasana% araka izay hitanao eo amin'ny sary etsy ambany.
Tsy mitovy amin'ny haavony izy ireo, araka ny hitanao etsy ambany.
Azontsika ampiasaina ihany koa ny 'mahalana' ho toy ny "mahalana", nefa tsy dia mahazatra loatra amin'ny teny Anglisy maoderina.
Ny fomba fampianarana ny Adverbs of Frequency
Hitako fa ilaina ny mampiseho ireo tabilao etsy ambony, mba hahitan'izy ireo ny toerana mahazatra indrindra amin'ny adverbs of frequence dia eo anelanelan'ny foto-kevitra sy ny matoanteny.Herezina ohatra hafa izay tiako ampiasaina amin'izy ireo aho:
Sara dia mivoaka foana amin'ny asabotsy hariva. Ny ankizilahy dia matetika misintona azy ary mitondra fiara ao an-tanàn-dehibe.Beno sy matetika iarahan'i Emma miaraka amin'ny fiaraha-misakafo. Amin'ny ririnina dia mandeha Skiing any Frantsa indraindray i Jama sy i Stephen sy i Stephen. satria te hijanona any ivelany izy ireo. Sahirana be i Marta ka tsy mahazo miala amin'ny asany intsony alohan'ny 7
Misy ohatra sasantsasany ampiasainao izay tsapanao fa manampy ny mpianatra hahatakatra tsara kokoa ny hevitr'ireo teny ireo?
Raha vao fantatry ny mpianatra izany, dia tsy maintsy ampahafantarintsika azy ireo ho ankoatra an'ity fitsipika ity - ny matoanteny 'mba'. Amin'ny fampiasana ny matoanteny 'mba', ny adverb ny frequencia dia tonga avy amin'ny matoanteny. Ohatra:
Olona maro no ao an-tanàn-dehibe isaky ny alatsinainy alina.Izany dia sarotra ny mahita toerana iray hialana amin'ny kianja.Mety tsy tapaka ara-potoana ny namantsika, ka tsy maninona raha tara isika.
Tahaka ny tranga matetika amin'ny teny Anglisy, dia misy fiovàna amin'io fitsipika io. Ohatra, azo atao ny mametraka ny 'indraindray' sy 'matetika' ny adverbs amin'ny fiandohan'ny sazy:
Indraindray dia manao ny devoarany miaraka amin'ny namana izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia mandalina amin'ny tenany manokana izy ireo.
Mora kokoa ny mamporisika ny mpianatra hanaraka ny fitsipika momba ny fametrahana ny habetsaky ny habetsahana eo amin'ny lohahevitra sy ny matoanteny. Miezaha mba tsy hampahatsiahy azy ireo ny matoanteny hoe 'ho' dia tsy mitovy ary mametraka ny adverb io aorian'izany.
Ahoana ny fomba fijerinao matetika ny manamarina izany fa indraindray dia mety hampihoron-koditra !?
Ny fanontaniana fangatahana
Mba hametrahana fanontaniana momba ny faharetana dia ampiasaintsika matetika hoe 'Impiry ...?' Ohatra:
Impiry moa ianao no mijery sarimihetsika? Isaky ny inona izy no milalao tennis? Impiry matetika no tonga ny fiaran-dalamby?
Azonao atao ihany koa ny mametraka fanontaniana tsotra amin'ny adverb of frequency. Ohatra:
Matetika ve ianao no miasa mafy? Moa ve izy ireny mazoto ara-potoana? ('Mandrakizay' fa tsy hoe 'tsy misy' amin'ny fanontaniana)
Avy eo dia ilaintsika ny mampahatsiahy ny mpianatra fa misy matoanteny modal amin'ny fehezanteny, napetrakay ny fitenenan-taonan'ny voambolana manaraka sy talohan'ny matoanteny main.Per ohatra:
Tsy maintsy manandrana foana ny tsara indrindra ianao. Afaka mahita seza ao amin'ny fiarandalanay izahay. Tsy tokony hentitra loatra amin'ny mpanjifa.
Io fitsipika io ihany no mihatra amin'ny matoanteny mpanampy - ny adverb ny frequence dia miditra eo amin'ny matoanteny auxiliary sy ny matoanteny main.For ohatra:
Tsy mbola nitsidika an'i Torkia mihitsy aho. Naka zavatra tao amin'ny biraoko foana aho. Tena manahiran-tsaina izy io. Tsy dia niasa tara-pahazavan'ny andro omaly ianao.
Ahoana no fomba hanazavanao izany amin'ny mpianatrao matetika?
Inona no zavatra tianao atao amin'ny mpianatra mba hahafahany mampiasa ny fanontaniana momba ny faharetana?
Matetika aho dia manasa ireo mpianatra mba hanoratra fanontaniana vitsivitsy ary avy eo dia mandehandeha manodidina ilay efitrano mifangaro sy manontany / mifampiahy - misy ohatra vitsivitsy ireto:
Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy misy ny fanatanjahantena sy ny fandaharam-potoana ary ny fandaharam-potoana. Matetika ve ianao no mandry? Matetika ve ianao no mihinana ao amin'ny trano fisakafoanana? Tara ve indraindray ny asa na ny sekoly?
Ampahafantaro anay ny zavatra ataonao ary inona no mahasoa anao! Azafady mba zarao ny torohevitrao sy ny zavatra niainanao ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra eto ambany!
minbonekhant50 · 3년 전
Balo phyit loz human less nay tar lar